Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA – Page 30 – Ny Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina
De Admin dans la catégorie Bokim-panabeazana
Bokim-panabeazana atolotra ny Vavolombelon’i Kristy ny Fanasina. « Ho Vavolombelon’i Kristy, ho Fanasin’ny tany, ho Fahazavan’izao tontolo izao…tsy ampy intsony ny mahay katesizy na ny mahalala an’i Kristy fa ny fiainan’i Kristy mihitsy no ampianarina olona » Mgr TABAO, evekan’i Mananjary (1927-1999).
Ankoatr’ireo fanabezana ny Vavolombelon’i Kristy dia mampiavaka ny Fanasina ny fandalinana ny fiainan’ny olona masina roa fakan-tahaka sy loharanom-pahasoavana ho an’ny FET : Masina Maria sy Masindahy Paoly. Amporisihana ny Vavolombelon’i Kristy handinika sy hianatra ny soa niainan’ireo olomasina roa ireo mba hahafahany mijoro ho Vavolombelona marina tokoa.
Efa ao anaty fandaharan’asa ihany koa ny fanavaozana ny boky Fanasina izay tsy misy intsony ankehitriny.
Fanasina, FET, VK
Bokim-panabeazana ho an’ny EKA ny Miara-dia. Atolotra an’ireo tanora maniry hahalala an’i Kristy, ho tia azy, hifanerasera aminy mba ho babony manontolo ny Miara-dia.
Miompana amin’i Kristy ny Miara-dia. Ahoana ny fomba fiainana ao anaty Ekipa ? Inona no toe-panahy tsara ananana rehefa mivory ? Ahoana no fomba anomanana tsara ny dingana mba hahatongavana amin’ny fiainana kristianina tonga lafatra ? Manampy anao haka fanapahan-kevitra matotra miorina amin’i Kristy ny Miara-dia.
EKA ianao ? Eny am-pelatananao ve ny Miara-dia ? Raha eny dia aza hadinoina ny mamadika azy matetika, tsy ny fanaovana tsianjery no tanjona fa fiainana ! Raha tsia kosa dia fotoana izao handalinanao bebe kokoa ny aim-panahy maha ekipa kristianina ankehitriny anao ! Hanampy anao amin’izany ny Miara-dia.
EKA, FET, Miaradia
Boky hanoro làlana ny mpiandraikitra eo amin’ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora kristianina mivondrona ao amin’ny Eokaristia ny Torolàlana. Mamaly ny fanirian’ireo mpiandraikitra mikatsaka ny fomba hitantanana ny fikambanana mba hahafahana mamaly ny antson’i Kristy.
Natao hanampy ny mpiandraikitra ihany koa ny Torolàlana mba handray an’i Kristy hanazava ny fiainany mba hahafahany manaraka azy sy mizara azy amin’ireo ankizy sy tanora iandraiketrany. Te hanampy ny mpanabe hitarika ny ankizy sy ny tanora any amin’i Kristy ny Torolàlana, miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra iainana sy i Kristy ivelomana izy.
Noho ny Fahasoavan’Andriamanitra sy ny fahavitrihan’ny mpanabe dia lany tanteraka ny Boky Torolàlana. Eo andalam-panavaozana azy ny foibe amin’izao fotoana izao ka trotroina am-bavaka mba ho tontosa soa aman-tsara ny fanavaozana ity boky fanovozan-tsoa sy aim-panahy ary loharanom-pahombiazana ho an’ny FET ity.
Irak’i Kristy : indreto zahay !
De Admin dans la catégorie IK
Iraka no iantsoana ny ankizy ao amin’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Iraka izy ireo satria nantsoin’i Kristy an-tsitrapo hampiray ny fanolorany sy ny vavaka ataony miaraka amin’ny Azy. Ary irahiny hitondra ny Hafany ho an’ireo namany.
Irak’i Kristy, mpitondra ny hafatra mahagaga
Sampana ivondronan’ireo ankizy latsaky ny 13 taona ny Irak’i Kristy. Irahina toy ny Mpaminany fahiny sy ny Apôstôly izy ireo hitondra ny Hafatra mahagaga. Ny Hafatra mahagaga dia ny Tenin’Andriamanitra ivelomany isan’andro izay raisiny ao amin’ny Evanjely mivantana na koa amin’ny gazety Hafatro. Rehefa mahazo hery avy amin’ny Tenin’Andriamanitra izy ireo dia mandray ny Tenany ao amin’ny Eokaristia. Izany no vatsy mankahery azy eny an-dalana hitory ilay Hafatra.
Irak’i Kristy : mivavaka, mandray an’i Jesoa, mahafoy tena, ho apôstôly
Mivavaka : Irahin’i Jesoa hamonjy ny namany ny Iraka. Ny fahasoavana no hoentiny manasoa sy mamonjy azy ireo. Ny fivavahana no hahazoany ny fahasoavana. Ka ny hataony voalohany indrindra dia ny mivavaka. Ary ny mivavaka moa dia miresaka amin’Andriamanitra Ray Aman-dreny be fitiavana. Misaotra sy midera Azy noho ny zava-tsoa rehetra omeny. Milaza amim-pahatsorana izay ao am-po sy izay irina.
Mandray an’i Jesoa : ao amin’ny Teny, ao amin’ny Eokaristia, ao amin’ny namana.
« Tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra noho ny Mahafoy ny Ainy ho an’izay tiany », hoy ny Tompo (Jo 15, 13). Asaina mandinika isan-kariva ny Iraka raha nanao ireny Asam-pamonjena sahaza ireny nandritra ny andro. Ary dia asaina manamarika ny rakipiainany, izany hoe izay asa vitany tamin’iny andro iny, ao anatin’ny taratasy kely atao hoe : « Miha-Jesoa » izy amin’izany. Dia faranany amin’ny vavaka alohan’ny hatory.
Hiasa ho an’ny Fiangonana no anampian’ny FET ny Iraka. Noho izany dia ny Tenin’i Jesoa hoe : « Mifankatiava ianareo toy ny nitiavako anareo ; izany no marika hahafantaran’ny olona fa Irako ianareo raha mifankatia » (Jo 13, 34-35), io no tsy maintsy iainany.
Izany teny izany no anampiana azy mba hisehoany ho Iraka marina tokoa eo amin’ny fiainany. Hijoro ho Apôstôly izy amin’izay ka tsy hitebiteby intsony na hatahotra (Jereo ny Fotokevitra).
Beazina ho be herimpo ny Irak’i Kristy
Zarina ny ankizy hanabe ny sitrapony hanahaka ny nataon’i Jesoa : Mahery fo. Atao amim-pinoana sady atao tsara avokoa izay rehetra atao. Amporisihana izy amin’izay ataony mba hanana fahazotoana : ankizy mazoto. Mampitombo ny Hery ao aminy izany. Miha-be herim-po miandalana izy. Miha-Jesoa isan’andro.
FET, IK, Irak'i Kristy
Iza moa ianao ry Vavolombelon’i Kristy ?
De Admin dans la catégorie VK
Sampana iray eo anivon’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ny Vavolombelon’i Kristy. Mamondrona ireo zatovo eo amin’ny 13 ka hatramin’ny 17 taona izy.
Ho anao mpanabe Vavolombelon’i Kristy
Fanamby miandry ny mpanabe ny hampifanentanana ny fanabeazana amin’ny toe-panahin’ny zatovo amin’ny taonany sy ny fivoaran’ny tsirairay ary indrindra ny fanohizana ny fianana sy ny fandalinana ny aim-panahy noraisina fony Iraka.
Vavolombelon’i Kristy : mandray, mivelona, mizara
Mandray : « Inty aho ankizivavin’ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny Teninao » (Lk 1, 38), hoy i Masina Maria tany Nazareta.
Vavolombelon’i Kristy velona ho an’ny Ray ny zatovo, ka mamoha ny fony sy manokatra ny sainy handray ny Teny sy ny Tenan’i Kristy toy ny nataon’i Masina Maria.
Mivelona : miaina an’i Kristy izay noraisiny ny Vavolombelona : « Matoa velona aho, dia tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko » (Gal 2, 20) ;
Mizara : I Kristy ilay noraisina sy niveloman’ny Vavolombelon’i Kristy no hozarainy. I Kristy fitiavana, fiadanana, hafaliana, fahamarinana ; i Kristy mahafoy tena, malemy fanahy, madio fo, mahatoky, miahy ny madinika, mitarika any amin’ny Ray…
Ireo Vavolombelon’i Kristy
Sehatra fanabeazana ny sitrapo ny Vavolombelon’i Kristy
Ny fanabeazana ny zatovo hanana sitrapo matotra no imasoana ao amin’ny sampana misy azy. Zarina omena zavatra hataony izy ary koa asa mila finiavana. Zarina ho sahisahy. Mahamafy azy izany sady manomboka mandresy ny henatra sy ny tahotahopoana izy amin’izay. Mandresy ny sitrapon’ny tena, fa manao ny sitrapon’i Jesoa amin’ny fanekena ny ray aman-dreny sy ny Mpanabe.
« Tsy ny sitrapoko, ry Ray no hatao fa ny Anao », hoy Jesoa. Ny Vavolombelon’i Kristy izay efa nizatra nanabe ny sitrapony dia tsy manana afa-tsy ny sitrapon’i Jesoa izay tsy hafa fa ny sitrapon’Andriamanitra ihany.
FET, Vavolombelon'i Kristy, VK
De Admin dans la catégorie Fiofanana
Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana ( na Aina ny Fivavahana teo aloha) no fototra sy fiandohana nipoiran’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Izy no loharano anovozany hery hoentina mamakivaky ny fiainana.
Aina sy Famonjena ny Fivavahana : ho an’ny olona rehetra
Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana dia fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana miaraka amin’ny fanoloran-tenan’i Kristy amin’ny Ray, amin’ny alalan’ny Fo Madion’i Maria, entanin’ny Fanahy Masina, araka ny fangatahana ampanaovin’ny Papa ny Fiangonana, ho famonjena izao tontolo izao.
Natao ho an’ny mpino rehetra vita Batemy ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana, satria ny olombelona rehetra no nantsoin’Andriamanitra ho ao amin’ny Fanjakany, sy nomanin’ny Tompo hanao asan’Apôstôly. Lalana mankao amin’io Fanjakana io ny làlan’ny fahamasinana. « Ny sitrapon’Andriamanitra dia ny hanamasinanareo ny tenanareo » (1 Tes 4, 3 ; Efez 1, 4). Antsoin’Andriamanitra ho amin’io fahamasinana io ny olona rehetra. Mitondra ho amin’izany fahamasinana izany indrindra ny AFAFI , araka ny tenin’i Kristy manao hoe : « Aoka ho lavorary ianareo tahaka ny fahalavorarian’ny Rainareo izay any an-danitra » (Mt 5, 48). Ny olona rehetra izay miaina ny AFAFI dia tena mandray anjara amin’ny Famonjena izao tontolo izao, noho ny firaisany aina amin’i Kristy, Loharanom-pahombiazana eo amin’ny asam-pamonjena. Rahefa mety ho asan’Apôstôly dia tsy azo sarahina amin’ny Fivavahana sy ny fahafoizantena.
Ny Vavaka Fanolorana ny andro
Ry Andriamanitra Ray be fitiavana ô, atolotro Anao ao am-pon’i Jesoa Zanakao, miaraka amin’ny an’ny olombelona rehetra, entanin’ny Fanahy Masina, omban’ny Fo Madion’i Maria, ao amin’ny Fiangonana : ny fivavahako, ny asako, ny hafaliako sy ny fijaliako rehetra anio ; ho fanonerana ny fahotako sy ho fangatahana ny zavatra rehetra, anoloran’i Jesoa ny tenany eo ambony Vatomasina ary ny anolorako azy indrindra amin’ity volana ity, dia mba…
Ny toe-panahy fototra ao amin’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana
Ny Tenin’Andriamanitra dia tahaka ny voa afafy, ka ny fivavahana fanolorana ny andro dia fahafoizan-tena ahafahana mandresy ny ratsy. Ny fiainana atolotry ny AFAFI dia ny fototra ijoroan’ny maha Kristianina mihitsy. Izay rehetra navotan’i Kristy dia voaantso ho mpiara-manavotra Aminy amin’ny Fanolorana ny andro. Mazava araka izany, fa ny toe-panahy fototra sady tanjona ao amin’ny AFAFI dia ny fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny firaisana aina amin’i Kristy ao anatin’ny firaisam-po tanteraka ombam-pitiavana. Ny firaisana aina amin’i Kristy dia ny fiainana ny fanolorana ny andro. Ka ny fanolorana ny fiainana amin’ny alalan’ny Fon’i Jesoa no ezaka fanabeazana ao anatiny. Izany no antony anomezan’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana toerana manokana ny fanajana ny Fo Masin’i Jesoa.
« Anisan’ny zava-dehibe anabeazana ny ankizy sy ny tanora ao amin’ny FET ny maha iray tsy mivaky ny finoana sy ny fiainana an-davan’andro. Ka ny fanolorana ny andri isa-maraina no fanazarana azy amin’izany. Io no fototra iorenan’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana. Aina ka mambomba ny fiainana manontolo. Raha tsy eo ny Aina dia faty no hita. Tafasaraka ny fanahy sy ny vatana » (cf. Torolalana, p. 32).
Ireo teny 6 fototra fanalahidin’ny Fanolorana ataon’ny FET
Misy 6 ny teny fototra fanalahidin’ny Fanolorana :
ü Ny fanolorana ataon’ny olombelona :
Atolony isan’andro amin’Andriamanitra ny fiainany manontolo : ny Lasa, ny Ankehitriny ary ny Hoavy no indray voatolotra : ny mandrakizay izany. Tsy andro iray monja, fa ny tantaram-piainana iray manontolo. Ao amin’io Fanolorana ny andro io no anazarana ny Ankizy sy ny Tanora hanao safidy goavana eo amin’ny fiainany manontolo. Avy ao am-po lalina ao no iboiboihan’ny fanolorana.
ü Ny anolorana ny andro dia Andriamanitra Ray
Satria Izy no loharano nipoirana : Loharanon’aina sy hiafarana. Samy afaka milaza toy ny nataon’i Jesoa ny Kristianiina rehetra : « Handeha ho any amin’Ilay naniraka ahy aho » (Jo 16, 5).
ü Ny iarahana manolotra ny andro dia i Jesoa Kristy
Ny Ray no anolorany ny andro fa miaraka amin’ny Fo Masin’i Jesoa. Olom-baovao i Kristy, ka ny fiombonana Aminy no hahafahana miseho amin’ny Ray, satria efa lasa ilay olona tranainy. « Ny Batemy, hoy i Md Augustin, no maha zanaka antsika ao amin’ny Zanaka ». Izy no anolorantsika ny Fanolorana isan’andro. I Kristy no mitondra antsika any amin’ny Ray. Miha-Jesoa isan’andro isika mba hahitana taratra an’i Jesoa ny fiainantsika. Dia i Jesoa Kristy Mpisorona, Mpanjaka, Mpaminany.
ü Ny Fanolorana dia entanin’ny Fanahy Masina
Ny Fanahy Mpankahery sy Mpanentana no manova sy manavao ny fiainana. I Kristy nihoatra ny tantara, izany hoe i Kristy nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana ary nitsangan-ko velona mandrakizay no iombonantsika. Izy nandresy no antsoini Paoly hoe : « Ny Fanahin’i Kristy » (2 Kôr 3, 17). Akaiky an’i Kristy nitsangan-ko velona isika ao amin’ny Fanahy Masina. Hampiasa sy hampamokatra ary hanavao ny fiainantsika manontolo anie ny fanahy Masina ! (Gal 5, 24-25).
ü Ny ohatra amin’ny fanolorana dia ny Fo Madion’i Maria
Tsy ny fiaraha-manavotra ihany no mahatonga an’i Maria ho mpanelanelana amin’ny olombelona sy i Kristy, fa ny fiombonana tanteraka amin’ny ENY nataony, ka atambatra amin’ny azy ny Enintsika, hanaovantsika Amen miaraka aminy amin’ny fanaovana ny sitrapon’ny Ray mandrakizay sy amin’ny fandaharany hatrizay hatrizay. Mila faharetana izany ; mila finoana toa ny azy.
ü Ny fitaovam-panolorana dia ny Fiangonana
Nahoana no any amin’ny faran’ny fanolorana vao tsiahivina ny Fiangonana ? Tsy mahagaga izany, satria izay voalaza momba ny Ray sy ny Zanaka mbamin’ny Fanahy Masina dia ao amin’ny Fiangonana avokoa no anatontosana azy.
Ny Fiangonana eo anivon’ny tantaram-pamonjena dia milaza fa : « Tsy misy Andriamanitra hafa azontsika idodododoana afa-tsy Ilay Andriamanitra nanorina ny Fiangonana sy monina ao aminy ». Koa izany no anolorantsika tena amin’ny Ray ho an’ny Fiangonana ary ny maha ao amin’izao tontolo izao azy no irosoan’ny Fiangonana ankehitriny. Izay ny olon’ny Eokaristia.
Ny Sorona Masina sy ny Fanolorana ny andro
« Ny Eokaristia no loharano ipoiran’ny fitoriana ny Evanjely sy tanjona ifaharany ary fototra iorenan’ny Fiangonana eo amin’ny asany, ka tsy maintsy ao amin’ny Misterin’ny Eokaristia no ianteheran’ny fiainam-pnahy Kristianina. Ary dia haniteraka lalina ny fomba fiainany ny Eokaristia ka hitarika azy handray anjara sy hivelona ao aminy. Izany no antony anantitrateran’ny AFAFI ny amin’ny Fanolorana isan’andro, fa io no anoloran’ny olona tsirairay amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy : ny tenany, ny fivavahany, ny asany, ny fijaliany, ny ahiahiny sy ny hafaliany, mba hahazoan’ny Fiangonana izay ilainy ary koa ho famonjena izao tontolo izao » (cf. Torolalana p. 151 – 152).
Ny asa rehetra, fantatra ho voatolotra amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy dia zary vavaka sy asam-pamonjena ny olombelona rehetra. Tafatambatra amin’ny fanoloran’i Kristy ny Tenany miaraka amin’ny antsika rehetra ho an’ny Ray mandrakizay ny asa voatolotra tsara, ka manjary Eokaristia Velona. Hita taratra eo sahady ny hevitry ny hoe « Fivondronan’ny Tanora ao amin’ny Eokaristia ». Ny fiainan’ny ankizy sy ny tanora manontolo dia Eokaristia. Eokaristia iainana. Ilay Eokaristia nanoloran’i Kristy ny fiainany manontolo miaraka amin’ny fiainantsika indray harivan’ny Alakamisy Masina, fiainana natolony amin’ny ray mandrakizay. Fiainana voatolotra hatramin’ny Nahaterahany ka hatramin’ny Nahafatesany, ary hatramin’ny nahafatesany ka hatramin’ny nitsanganany ho velona. Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina.
Ny fanajana sy ny fitiavana ny Fo Masin’i Jesoa
(cf. Torolalana, p. 152)
Ny firaisana aina tanteraka amin’i Jesoa no foiben’ny AFAFI. Tsy misaraka ny Fon’i Jesoa be Fitiavana sy ny Eokaristia, foiben’ny litorjia sy ny Sakramenta hafa rehetra. Ary ny Tenin’Andriamanitra sy ny Eokaristia dia sakafo tsy azo sarahina, mba hampiroborobo ny finoana. Finoana miorina amin’Andriamanitra Tokana Olona Telo, Fitiavana lalina mamerovero. Amporisihin’ny AFAFI mafy ireo mpikambana ao aminy hanam-pahazarana hanajana sy ho tia ny Fo Masin’i Jesoa. Mamaly fitia ny Tompo izy amin’izany, ka dia manokana ny tenany ho Azy kosa indray.
Avy ao no nipoiran’ny fiainan’ny FET sy ny fanabeazana rehetra atao ao amin’ny FET, izany hoe : ny Sampana sy ny Dingana isan-tsampana ary ny ezaka rehetra atao amin’izany Dingana izany.
Ny fanajana an’i Masina Maria
(cf. Torolalana, p. 153)
Fon-janaka no entina mitia ani Masina Maria, Ilay tsy azo sarahina amin’ny asam-panavotana antsika. Iezahana ny hianatra azy ; ny Fanekena niainany. I Masina Maria manko no Mpanelanelana antsika amin’ny Zanany, ka amin’ny alalany no ampakarana ny fanolorana ho any amin’Andriamanitra. Manao sapile iray isan’andro farafahakeliny. Fon-dReny ny an’i Masina Maria, ka ankinina aminy izay zavatra manahirana ny Fiangonana. Amporisihina mafy ny fanajana an’i Masina Maria, indrindra ny fitiavana azy, satria fantatra fa tsy manimba velively ny firaisan’ny mpino amin’ni Kristy ny fanelanelanan’ny Reniny, fa vao mainka koa mahamafy fatorana azy.
Miombona amin’ny Fiangonana, « Sentire cum Ecclesia »
Miara-mitepo amin’ny Fiangonana. Iray fo sy fanahy ary saina aminy. Ny ezaka rehetra atao amin’ny Dingana dia ny miha-Jesoa isan’andro. Miha-Jesoa isan’andro, mihavao isan’andro amin’ny fanolorana ny andro isa-maraina. Manatanteraka izany fanolorana izany mandritra ny andro. Manamarika izay vita rehefa hariva (Examen de conscience). Ezaka isan’andro atao ao amin’ny Fiangonana izany.
Koa satria fototra ijoroan’ny FET ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana (AFAFI), dia miezaka ny FET hanatanteraka ireto soridalan’ny AFAFI ireto :
– Miray amin’Andriamanitra Tokana Olona telo
– Miray tanteraka amin’i Jesoa Kristy
– Manaja sy tia an’i Masina Maria
– Miombona amin’ny Fiangonana
– Mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra ; mivavaka lalandava
Ny sampana izay miraikitra amin’ny foto-boaloboka ihany no afaka mamoa be. Tahaka izany koa ny FET, tsy afaka hahatonga ny ankizy sy ny tanora beaziny ho olom-banona ho an’ny Firenena,masina ho an’ny Fiangonana izy raha misaraka ami’ny AFAFI ary ny fiainana entiny manatratra io tanjona io dia : ny Vavaka – Tenin’Andriamanitra – Eokaristia.
AFAFI, FET, Fivondronana Eokaristikan'ny Tanora
De webmaster dans la catégorie Vavaka
Zato taona ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ! Nosokafana ny 22 jona teo ny fankalazana ary hofaranana any Rôma amin’ny taona ho avy.
Ho fanomanana ny fihaonana any Rôma (4 ka hatramin’ny 10 aogositra) ary indrindra ho fiombonam-bavaka mandritra ny fankalazana ny jobily faha 100 taonan’ny FET dia manentana antsika hanandratra ity vavaky ny taon-jaobily ity.
Marihina fa ny vavaka nanomanana ny fihaonana tany Argentine ihany io fa tsy namorona vaovao ny foibe any Rôma. Tsapa tokoa mantsy fa mahafintina ny maha FET antsika izy ary fahasoavana tena ilaintsika no voasoratra ao.
Ry Jesoa Tompo sy Zokinay ô!
Nofidinao sy navondronao ao amin’ny FET izahay.
Asehoy anay ny Tarehinao nitsangan-ko Velona,
sokafy ny Fonao miara-dia aminay isan’andro.
Omeo anay ao amin’ny Eokaristia ny Ainao;
ampianaro miaina araka ny fombanao izahay
hanomezanay ny ainay koa.
Te ho iraka miaraka aminao izahay hanompo ny Fiangonana.
Hazavao amin’ny tsikinao ny Fihaonanay FET
ary hampitombo ny hafalianao eran-tany anie izany.
Ry Maria Renin’ny FET ô, andao hiaraka aminay.
FET, FET 100 taona, Fivondronana Eokaristikan'ny Tanora, vavaka
Ny FET dia miaina amim-pirahalahiana miaraka amin’I Jesoa. Hatrany am-boalohany dia efa nifidy namana I Jesoa ary nanasa azy ireo mba hiara-dalana Aminy teo amin’ny fiainany andavanandro sy tamin’ny iraka fitoriana ny fitiavan’ny Ray an’izao tontolo izao notanterahiny. Iraka feno hafaliana izany, ary nameno ny fony feno hafaliana.
Izay 100 taona lasa izay, naha Kroazady Eokaristika ary naha FET, dia asaina isika hifampizara io fiainam-pirahalahiana sy hafaliana io. Tombony lehibe ho antsika izany ary mitondra fahasambarana ho antsika. Feno fankasitrahana isika afaka mankalaza izany. 100 taona izao no niaradia tamin’I Jesoa isika tamin’ny firenena maro, tamin’ny kolontsaina samihafa, ary taranaka maro no nahazo fomba ho enti-miaina sy mitia avy amintsika.
Amin’ny alalan’ity hafatra ity no anehoanay ny faniriana hanokatra amin’ny fomba manetriketrika ny Jobilin’ ny FET, izay hanomboka ny 22 jona ho avy izao, fetin’ny Vatana aman-dràn’i Kristy, Andro eran-tanin’ny Fikambanantsika, ka hatramin’ny fihaonam-be eran-tany hatao any Roma ny 4 ka hatramin’ny 10 aogositra 2015.
Nofidina ho lohahevitri’izao taon-jobily izao sy ho an’ny fihaonam-be any Rôma, ny voasoratra ao amin’ny Evanjelin’i Md. Joany 15, 11 hoe: “Mba ho ao aminareo ny fifaliako”.
Midika inona ho antsika ny fankalazana ity Jobily noho ny fahazato taona ity? Irinay mba hanampy antsika hiaina ny hafaliana amin’ny maha naman’i Jesoa antsika izao fankalazana izao. Mahatsapa isika fa asainy hanakaiky kokoa ny fony ary hirotsaka bebe kokoa amin’ny asa ataontsika eo anivon’izao tontolo izao.
Loharanon-kevitra roa no atolotray mety hanampy antsika mandritra ny taon-jobily. Azonareo ifotorana dieny izao izany ho fanomanam-panahy:
Ny teny nolazain’i Jesoa tamin’ireo mpianany tamin’ny fotoanan’ny Sakafo farany, araka ny hita ao amin’ny Md Jo 15, 9-17 izay iresahany momba ny fitiavana sy ny fifankatiavana.
Ny Fanentanana Apôstôlika “Ny hafalian’ny Vaovao Mahafaly”(Evangelii Gaudium) ka anirahan’ny Papa Fransoa antsika hiaina an-kafaliana sy hitory ny Evanjely (Jereo manokana ny lah. 1 hatramin’ny 17 sy ny lah.275 hatramin’ny 283).
Misy tetiandro aroson’izao taon-jobily izao aminareo. Efa nalefa taminareo izany, nefa mbola hohitanareo koa amin’ny faran’ity taratasy ity. Matoky izahay fa hahita zavatra ho enti-manamarika izao fankalazana izao ianareo mba ho zava-dehibe eo amin’ny firenenareo ny fankalazana.
Efa nanomboka ny fanomanana ny fihaonam-be eran-tany hatao any Roma amin’ny taona manaraka io. Ireo feno 15 taona mihoatra no asaina amin’izany. Irinay mba ho tanora ny ankamaroan’ny solontena avy amin’ny firenena tsirairay; manentana ny olon-dehibe AFAFI sy FET kosa izahay hanohana ara-bola amin’ny fandraisan’anjaran’ny tanora.
Ny FET ao Italia dia miezaka ny handray antsika mba hampihena ny fandanianan’ny mpizaika; ny foibe sy ny toerana handraisana ny vahiny dia ao amin’ny Kolejy Massimo, kolejin’ny Zezoita ao Roma. Samy hafa ny saram-pisoratana anarana: 80 euros ho an’ireo avy amin’ny firenena ivelan’I Erôpa; 150 euros kosa ho an’ireo avy amin’ny firenena Erôpeanina rehetra.
Fantatray fa ho an’ny maro dia lafo dia lafo ny sara-dalana, nefa indrisy fa tsy manam-bola ho enti-manampy amin’ny fividianana izany izahay. Manoro hevitra anareo kosa izahay mba ho dieny izao dia efa hitady ny ho enti-manana amin’izany ianareo mba hahafahanareo ho tonga amin’io fihaonana io.
Eo an-dalam-pamolavolana ny fandaharam-potoana ho amin’io herinandro io izahay izao, ka ny 4 Aogositra no fahatongavana ao Roma ary ny 10 aogositra no fodiana. Hanam-potoana hifampizarana ny haren’ny fahasamihafan’ny kolontsaina avy amin’ny FET eran-tany isika, ary mino marina izahay fa ho herinandro miavaka tokoa io. Fantatray koa fa hanao izay fara hery ianareo hahatongavana amin’io fihaonam-be io. Amin’izao fotoana anoratanay aminareo izao dia mbola tsy fantatra na hahazo fihaonana manokana amin’ny Papa Fransoa isika (fa efa nangataka aloha), nefa raha tsy mahazo dia hahita azy ihany isika miaraka amin’ireo mpivahiny hafa eo amin’ny Kianjan’i Md Piera.
Alefanay aminareo koa ny vavaka ho an’ny fankalazana ny fahazato taona (Jereo tovana 1), izay efa nampiasaina tamin’ny Kôngresy tany Argentine tamin’ny 2012 ihany no averinay. Ampiasao io isaky ny misy fihaonanareo mba hanomana ny fonareo ho amin’io fihaonam-be eran-tany io. Hohitanareo koa ny Famantarana ôfisialy (Logo officiel).
Misy mpanakanto FET vitsivitsy eo an-dalam-pamoronana ny hira faneva ofisialy ho an’io fihaonana eran-tany io. Hampahafantarinay anareo izany afaka volana vitsivitsy. Ankoatr’io hira faneva ofisialy io dia ampirisihinay koa ianareo hamoron-kira mifandray amin’ny fahazato taonan’ny FET, izay hifampizarana sy hohiraina mandritra io herinandro ao Roma io.
Hafaliana lehibe ny hihaona aminareo any Roma amin’io taona manaraka io!
Mamihina anareo sy manao veloma anareo “araka ny fomban’ny FET”.
Claudio sj Ray iombonana eran-tany taloha
Frederic sj; Ray iombonana ankehitriny
Lourdes, rjm, Mpanampy eran-tany
FET, FET 100 taona, Fivondronana Eokaristikan'ny Tanora